Amin'izao fotoana izao dia mihamitombo ny sehatry ny tambajotra. Samihafa ny karazana fanavaozana mampikorontan-tsaina, toy ny SDN sy ny rahona izay manova ny fomba fisafoana ny tambajotra nandritra ny roapolo taona lasa. Na izany na tsy izany, ny Cisco dia teo amin'ny toerana ambony indrindra amin'ny lalao tambajotra ho an'ny sasany, taona maro. Tsy miankina afa-tsy amin'ny fampandrosoana sy ny famolavolana fotodrafitr'asa izany, ankoatra ny fandrosoana samihafa toy ny fifantohana amin'ny angona sy ny ezaka iombonana. Ny 80% amin'ny tambajotran'izao tontolo izao sy ny Internet dia mitantana ny Cisco. Mahafinaritra foana ny mahazo tombony amin'ny mpisava lalana indostrialy. Misy sasantsasany azo ekena ao amin'ny tambazotra misy ao, na ny CCNA Security aza no tena tanjona indrindra amin'ny lalao (IT certification) amin'ny fotoana lava be. Na inona na inona mety tsy hivoahanao amin'ny fampiasana cisco azy, amin'ny fampidirana ao amin'ny CCNA, dia hanangana rafitra miorina eo amin'ny sehatry ny tambajotra manomboka amin'ny ambaratonga voalohany indrindra ianao.
Fampianarana modules momba ny fampianarana CCNA
Mahaliana ny CCNA Certification
Ny Cisco Certified Network Associate (CCNA) dia miavaka amin'ny fanamarinana ankapobeny ankapobeny ankapobeny ankehitriny. Ny angon-drakitra dia mampiseho fa ny CCNUMX tapitrisa CCNA dia nahazo ny fanomezan-dàlana CCNA hatramin'izao nanomboka tamin'ny 1, fony izy niseho voalohany. CCNA dia tsy tombony ho an'ny mpiasan'ny mpiasa sy ny mpampiasa, ankoatra an'ireo mpitantana ihany koa. Mazava ho azy fa manana mari-pahaizana goavana ny serasera momba ny fiarovana CCNA. Amin'ireo làlana mankany amin'ny fanatontosana ity fanamarinana ity dia maro ireo manam-pahaizana IT dia nanova ny fiainany ary nahavita tombontsoa vitsivitsy. Ohatra efa nisy ny manam-pahaizana momba ny IT, na dia efa niasa ela be aza ny filohan'ny CCNA.
Ny fampiofanana ara-pahasalamana CCNA dia manampy amin'ny famoahana angon-drakitra sy fampiharana mba ahafahan'izy ireo manamarina, manamboatra ary manadihady ny zavatra fototra entin'ny Cisco WLAN amin'ny orinasa bitika kely (SMB) ary manamboatra tambajotra. Manampy ireo manantena ny hanangana ireo hevitra sy ireo olana mifandraika amin'ny fifandraisana LAN / WAN. Samy nampidirina ho amin'io mari-pamantarana io ny protocoles samihafa IP, IGRP, famindrana rindranasa, CLAN, Ethernet, Serial, IP RIP, RIP, Lisitry ny Access, ary ny sisa. Raiso ny iray amin'ireo fianarana, izay hanomana anao hifindra any amin'ny faritra maitso. Angamba mety miditra amin'ny orinasa multinôlôney-dollar sy fikambanana 500 ianao. Izany karazana fanatanjahantena izany no hampisaraka anao amin'ny asa iraisana iraisana.
Ny fiofanana momba ny fantsom-bokin'i Cisco dia anisan'ny betsaka amin'ireo tetikasa miavaka indrindra eran-tany ary vato iray mitarika ho an'ireo olona manana tanjona Silicon Valley. Fifanakalozam-baovao ho an'ity tranonkala fifaneraserana ity eo am-piatrehana akaiky anao ary avelao ny fiantsoana anao hiditra amin'ny vokatra vaovao azo raisina.
Ny mari-pankasitrahana CCNA dia ny marika fototra na ny mari-pahaizana momba ny Cisco CCIE. Ny fikatsahana ny fanamarinana Cisco CCNA dia hanampy anao hanatontosa ny teboka misy anao ary hahatratra ny mari-pahaizana lehibe. Ao anatin'ireto rakitsoratra ireto dia vitsy amin'ireo tombony tena ilaina amin'ny fitadiavana ny CCNA Course, jereo -
Afaka manantena ny hiakatra any amin'ny andraikitrao ianao ary handoa ny fikambanana misy anao.
Azonao atao ny manantona ny fibodoana amin'ny karaman'ny mpiasa.
Ny CCNA dia hita na aiza na aiza manerana an'izao tontolo izao, izay midika fa azonao atao amin'ny ankapobeny ny toerana lava any ivelany.
Ny fahatsiarovan-tenan'ny fahatsiarovan-tena tahaka ny CCNA no fanadinana IT.
Ny CCNA fanamarinana ny fiantsoana dia mametraka ny mety hisian'ny asa maro samihafa. Na dia eo aza izany, ireo mpifaninana ihany koa dia hampahafantarina any amin'ny faritry ny fiaramanidina sy ny fifandimbiasan'i Cisco. Ireo manam-pahaizana ara-tsiantifika Cisco dia hanana koa ny fahafahana mitantana sy mampifandray ny fifandraisana amin'ny toerana lavitra izay mihazakazaka ao amin'ny WAN. Izy ireo dia mamelombelona ihany koa amin'ny fampahalalana fototra momba ny fiarovana ny tambajotra an-tambajotra, ny tambajotra PC sy PC hafa.
Ny fanolorana ny mari-pankasitrahana CCNA anao, dia mahazo ny fahafenoana mahafeno fepetra ho an'ny sehatr'asa isan-karazany ianao. Anaty firaketana an-tsoratra dia ny profil-occupation normal-
Na dia eo aza ny tombontsoa hafa amin'ny CCNA dia ny fepetra ilaina ilaina dia mandeha ao amin'ny 10 + 2 standard. Hatramin'izao fotoana izao, ny fahatelo ambin'ny folo dia mandao ny olona izay manana fientanam-po ampy ho an'ny sehatry ny rafitra fandaminana sy ny tambajotra dia afaka mitady CCNA tsy misy fepetra maivana. Ho fanatsarana ihany koa ny fanantenana ho an'ny fanantenana amin'ny fanatanterahana izany. Toy izany koa, ny CCNA no tena ilaina mba hikatsahana ireo mari-pamantarana samihafa mandeha amin'ny fiaramanidina Cisco, anisan'izany ny CCIE. Ireo olona izay miasa ao amin'ny orinasa ary mitaky fanamarinana ao amin'ny LAN / WAN dia mandray ihany koa ity dingana ity izay hanampy azy ireo noho ny fandrosoana.
Na rahoviana na rahoviana na rahoviana ianao no manomboka asa, dia manolotra faritany midadasika ho an'ny fampandrosoana amin'ny fiantsoana ny indostrian'ny tambajotra. Ho an'ny fandrosoana maharitra, anisan'izany ireo ho an'ny fikambanana sy ny governemanta. Ny tsirairay amin'ireo tambajotra dia mitaky ny olona mahafeno fepetra hitantana ny tambajotra sy ny filaminana. Ny tambajotran'ny tambajotra dia manana fomba fijery bebe kokoa ary koa ny fanamafisana ny CCNA dia hanome anao ny fahatanterahany sy ny fankasitrahany ny asanao IT.
Innovative Technology Solutionsdia mpandraharaha amin'ny fampiofanana IT ho an'ny fikambanana ambony. Izany dia manoro ny manam-pahaizana hamolavola rafitra mamorona eo amin'ny tambazotra sy ny sehatra samihafa. Manome fampiofanana mahafinaritra amin'ny CCNA ho an'ny orinasa izy ireo.
Fanofanana momba ny CCNP - Ny Tari-dalana feno